FAMPIROBOROBOANA NY BANKY: Nametrahana masoivohona banky etsy amin’ny lalana By Pass – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:46
Manampy betsaka ireo mponina ao Alasora sy ny manodidina ny fisian'ny BMOI eny an-toerana.
Accueil/Songadim-baovao/FAMPIROBOROBOANA NY BANKY: Nametrahana masoivohona banky etsy amin’ny lalana By Pass
FAMPIROBOROBOANA NY BANKY: Nametrahana masoivohona banky etsy amin’ny lalana By Pass
Lucien R. 23 novembre 2020
Antoka iray mitondra mankany amin’ny fampandrosoana marina ny fampitomboana ny fidiran’ny Malagasy eo amin’ny tontolon’ny banky. Mbola ambany anefa ny tahan’ny olona miserasera amin’ny banky raha ho antsika eto Madagasikara manokana. Antony maha zava-dehibe ny fampitomboana isa ireo sampandraharahan’ny Banky, izay afaka manakaiky vahoaka kokoa. Izany indrindra no nahatonga ny banky BMOI na ny Banque Malgache de l’Océan Indien, nanokatra ny ivon-toerany vaovao etsy amin’ny lalana By Pass.
“Ity fitokanana ny ivon-toerana vaovao ity dia manamafy ny fahavononan’ny BMOI ny hanome tolotra tsaratsara kokoa hatrany ho an’ny mpanjifa sy ireo mila raharaha ao aminy”, hoy ny fanazavana. Tsara marihana fa ity no Banky voalohany miorina manamorona ny lalana By Pass hatreto. Misy GAB sy fitaovana fandrotsaham-bola voaaro “MALAKY+” ao amin’ity ivon-toeran’ny BMOI vao nosokafana ity, ary hiasa 24ora/24ora, 7andro/7andro. Noho izany, zava-dehibe ho an’ireo tanàna manodidina ny fitsanganan’ny banky eny an-toerana, indrindra ho an’ny Kaominina Alasora. “Hanampy betsaka ireo mpandraharaha ara-toekarena manodidina iny faritra iny ny fisokafan’ity banky ity, satria tsy mila miala lavitra ny tanàna intsony izy ireo”, hoy ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny BMOI. Marihana fa nitombo be ireo mandraharaha eny amin’ny faritra manamorona ny lalan’I By Pass amin’izao fotoana izao. Ary vao maika niha maro izany hatramin’ny nisian’ny lalana Rocade Nord/ Nord-Est d’Antananarivo.
Ny zoma 20 novambra 2020 teo no notanterahana ny lanonam-pitokanana, natrehin’ny ben’ny tanànan’Alasora, Jimmy Randriantsoa sy ny Tale Jeneralin’ny Banky BMOI, Alain Merlot. Lanonana izay tao anaty fanajana feno ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra takian’ny vanim-potoana ankehitriny.
Distrikan’Ambalavao : Tsy nahitana trangana halatr’omby tao anatin’ny volana vitsy
FANOHANANA NY ADY AMIN’NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA : Notoloran’ny “Assist Aviation” fiaramanidina ny Zandary
FANONDRANANA AN-TSOKOSOKO: Malagasy roa sarona niaraka tamin’ny volamena 49kg tao Kaomoro
TONTOLO IAINANA: Hamafisina ny fiarovana ny fonenan’ny Varika